အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်Appလေး အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ – Zartiman
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်Appလေး အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ် နဲ့ IG မှာလည်းပုံတွေတင်တာဘဲ ဆိုပြီးရောထွေးမတွေးသင့်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ် App ဟာ ရုရှားအခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး Fb နဲ့ IG ကအမေ ရိကန်အခြေစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက သုံးစွဲသူတွေအပေါ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာ သူတို့ဘရမ်းရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့တင်ဖြစ်စ ရာမရှိပါ။အမုန်းစကားဖြန့်တာကို မကိုင်တွယ်နိုင် လို့တောင် ဇူကာဘတ်ကို ဆီနိတ်မှာ ခေါ်ကြိတ်တာအားလုံး အသိပါ။FaceBook/IG ကတောင်းတဲ့ user agreement နဲ့ Face App ကတောင်းတဲ့ user agreement ကလည်းမတူပါ။
သုံးသင့် မသုံးသင့် ဆရာကြီး လုပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါခင်ဗျား။ အချက်အလက်များ တင်ပြရုံသာ။ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဒေတာရဲ့ ပဲ့ကိုင်မို့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ဒါဖတ်ပြီးမှ FaceApp သုံးပါ။ ဒီကုမ္ပဏီသည် ရုရှား ကုမ္ပဏီပါ။ဒီကုမ္ပဏီသည် GDPR (General Data Protection Regulation) ကို လိုက်နာသော ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းသွင်းမထားပါ။ GDPR-compliant မဖြစ်ပါ။ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာပဲ သူတို့က ပြုပြင်လိုက်တာ မဟုတ်ပါ။ သူ့တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆာဗာထဲကို လှမ်းပို့ပြီး သိမ်းထားပါတယ်။
(user က တောင်းဆိုရင် ပြန်ဖျက်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ၄၈ နာရီပဲ သိမ်းထားမယ်လို့ ပြောပါတယ် ဒါပေမယ့် တကယ် ဖျက်မဖျက် သိဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ သူတို့က ကိုယ်တောင်းဆိုရင် ဖျက်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်လို တောင်းဆိုရမလဲ၊ သူတို့ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ ကိုယ်သိပါသလား) ဓာတ်ပုံကို ဓာတ်ပုံလို့ပဲ မမြင်ပါနဲ့။ မျက်နှာပါတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ရှင်းရှင်းပြောရင် ကိုယ့်ရဲ့ biometric data ပါပဲ။ အခုခေတ် မျက်နှာဒေတာ ဟာ အရင်ခေတ်က လက်ဗွေလို ဖြစ်လာနေပါပြီ။
မျက်နှာနဲ့ ဖုန်းကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ မျက်နှာနဲ့ windows hello ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကို ဝင်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဗွေကို ရုရှားကုမ္ပဏီ ကို ဘယ်သူမှ အတင်းအဓမ္မ မခိုင်းဘဲ ပေးပို့သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ပို့နေတာ မှုန်တိမှုန်ဝါး ဂရုဖိုတို မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာသီးသန့် ရိုက်ထားတဲ့ high resolution image ပါ။FaceApp ကို သုံးပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အသက်၊ တည်နေရာ၊ ကြိုက်နှစ် သက်သော အရာများ၊ ရောက်ရှိခဲ့သော နေရာများ၊ ကိုယ့်မျက်နှာ ဒေတာ အစရှိတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ကုမ္ပဏီကို ပေးသုံးဖို့ သဘောတူညီပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ FaceApp ရဲ့ user agreement ပါ။ အင်မတန် လန့်ဖွယ်ပါ။ You grant FaceApp “a perpetual, irrevocable, nonexclusive, royalty-free, worldwide, fully-paid, transferable, sub-licensable license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, creative derivative works from, distribute, publicly perform and display your User Content, and any name, username or likeness provided in connection with your User Content in all media formats and channels now known or later developed, without compensation to you.”
perpetual – ကိုယ့်ဒေတာကို ခဏ ပေးတာ မဟုတ်။ တစ်သက်လုံးပေးရတော့မှာ။irrevocable – ပေးပြီးရင် စိတ်ပြောင်းပြီး ဘွာတေး ခတ်မရ၊ ပေးပြီးရင် အဲဒါ အတည်ပဲ။royalty-free – ဒီကုမ္ပဏီကို ပေးသုံးတာကြောင့် ပိုက်ဆံရမည် မဟုတ်။ အလကား ပေးပစ်လိုက်တာ။ worldwide – ကုမ္ပဏီက ကိုယ့်ဒေတာကို ရုရှားမှာတင် မဟုတ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သုံးခွင့်ရှိတယ်။transferable – ဒီကု မ္ပဏီက ကိုယ့်ဒေတာကို နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို လက်ပြောင်းလက်လွှဲ လုပ်ခွင့်ရှိ။
sub-licensable – ကိုယ့်ဒေတာကို တစ်ခြားဆီကို လိုင်စင်နဲ့တကွ ကုမ္ပဏီက ရောင်းစားခွင့်ရှိ။modify, adapt, publish, translate, creative derivative works from – ကိုယ့်ပုံကို ပုံတူကူးခွင့်သာ မက သူတို့ ကြိုက်သလို ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိ၊ (ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ့်မျက်နှာကို ဝတ်လစ်စလစ် ဘော်ဒီနဲ့ ဖိုတိုရှော့လုပ်လည်းရ)distribute, publicly perform and display your User Content – ကိုယ့်ပုံကို၊ သူတို့ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ပုံကို သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးလည်း ပြခွင့်ရှိ။
all media formats and channels now known or later developed – လမ်းဘေးဆိုင်းဘုတ်သာမက တီဗီ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ယူ ကျုအပါအဝင် ရှိရှိသမျှ မီဒီယာ ချန်နယ်အားလုံးမှာ ပြလို့ရ။ အခုမရှိသေးဘဲ နောင်မှပေါ်လာတဲ့ ချန်နယ်မှာလည်း ပြလို့ရ. without compensation to you – ဘယ်လိုပြပြ ကိုယ်က ပိုက်ဆံရမည်မဟုတ်။သုံးသင့်/မသုံးသင့် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဒါပါဘဲ။
REF: SHWE YAUNG LAN
ဖစျေ့ဘှတျ နဲ့ IG မှာလညျးပုံတှတေငျတာဘဲ ဆိုပွီးရောထှေးမတှေးသငျ့ပါ။ ဖစျေ့ဘှတျ App ဟာ ရုရှားအခွစေိုကျဖွဈပွီး Fb နဲ့ IG ကအမေ ရိကနျအခွစေိုကျဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှကေ သုံးစှဲသူတှအေပျေါအခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြိုးလုပျဖို့ဆိုတာ သူတို့ဘရမျးရဲ့ ပုံရိပျနဲ့တငျဖွဈစ ရာမရှိပါ။အမုနျးစကားဖွနျ့တာကို မကိုငျတှယျနိုငျ လို့တောငျ ဇူကာဘတျကို ဆီနိတျမှာ ချေါကွိတျတာအားလုံး အသိပါ။FaceBook/IG ကတောငျးတဲ့ user agreement နဲ့ Face App ကတောငျးတဲ့ user agreement ကလညျးမတူပါ။
သုံးသငျ့ မသုံးသငျ့ ဆရာကွီး လုပျဖို့ မရညျရှယျပါခငျဗြား။ အခကျြအလကျမြား တငျပွရုံသာ။ ကိုယျသာလြှငျ ကိုယျ့ဒတောရဲ့ ပဲ့ကိုငျမို့ ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျပါ။ဒါဖတျပွီးမှ FaceApp သုံးပါ။ ဒီကုမ်ပဏီသညျ ရုရှား ကုမ်ပဏီပါ။ဒီကုမ်ပဏီသညျ GDPR (General Data Protection Regulation) ကို လိုကျနာသော ကုမ်ပဏီအဖွဈ စာရငျးသှငျးမထားပါ။ GDPR-compliant မဖွဈပါ။ကိုယျတငျလိုကျတဲ့ ဓာတျပုံကို ကိုယျ့ရဲ့ ဖုနျးထဲမှာပဲ သူတို့က ပွုပွငျလိုကျတာ မဟုတျပါ။ သူ့တို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဆာဗာထဲကို လှမျးပို့ပွီး သိမျးထားပါတယျ။
(user က တောငျးဆိုရငျ ပွနျဖကျြပေးမယျလို့ ပွောပါတယျ။ တဈခြို့ကလညျး ၄၈ နာရီပဲ သိမျးထားမယျလို့ ပွောပါတယျ ဒါပမေယျ့ တကယျ ဖကျြမဖကျြ သိဖို့ ခဲယဉျးပါတယျ။ သူတို့က ကိုယျတောငျးဆိုရငျ ဖကျြပေးမယျဆိုရငျတောငျ ဘယျလို တောငျးဆိုရမလဲ၊ သူတို့ကို ဘယျလို ဆကျသှယျရမလဲ ကိုယျသိပါသလား) ဓာတျပုံကို ဓာတျပုံလို့ပဲ မမွငျပါနဲ့။ မကျြနှာပါတဲ့ ဓာတျပုံဟာ ရှငျးရှငျးပွောရငျ ကိုယျ့ရဲ့ biometric data ပါပဲ။ အခုခတျေ မကျြနှာဒတော ဟာ အရငျခတျေက လကျဗှလေို ဖွဈလာနပေါပွီ။
မကျြနှာနဲ့ ဖုနျးကို ဖှငျ့လို့ရပါတယျ။ မကျြနှာနဲ့ windows hello ပါတဲ့ ကှနျပြူတာထဲကို ဝငျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လကျဗှကေို ရုရှားကုမ်ပဏီ ကို ဘယျသူမှ အတငျးအဓမ်မ မခိုငျးဘဲ ပေးပို့သလို ဖွဈနပေါတယျ။ ကိုယျ့ပို့နတော မှုနျတိမှုနျဝါး ဂရုဖိုတို မဟုတျပါ။ ကိုယျ့မကျြနှာသီးသနျ့ ရိုကျထားတဲ့ high resolution image ပါ။FaceApp ကို သုံးပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အမညျ၊ အလုပျအကိုငျ၊ အသကျ၊ တညျနရော၊ ကွိုကျနှဈ သကျသော အရာမြား၊ ရောကျရှိခဲ့သော နရောမြား၊ ကိုယျ့မကျြနှာ ဒတော အစရှိတဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ကုမ်ပဏီကို ပေးသုံးဖို့ သဘောတူညီပွီးသား ဖွဈသှားပါပွီ။
ဒါကို ဖတျကွညျ့ပါ။ FaceApp ရဲ့ user agreement ပါ။ အငျမတနျ လနျ့ဖှယျပါ။ You grant FaceApp “a perpetual, irrevocable, nonexclusive, royalty-free, worldwide, fully-paid, transferable, sub-licensable license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, creative derivative works from, distribute, publicly perform and display your User Content, and any name, username or likeness provided in connection with your User Content in all media formats and channels now known or later developed, without compensation to you.”
perpetual – ကိုယျ့ဒတောကို ခဏ ပေးတာ မဟုတျ။ တဈသကျလုံးပေးရတော့မှာ။irrevocable – ပေးပွီးရငျ စိတျပွောငျးပွီး ဘှာတေး ခတျမရ၊ ပေးပွီးရငျ အဲဒါ အတညျပဲ။royalty-free – ဒီကုမ်ပဏီကို ပေးသုံးတာကွောငျ့ ပိုကျဆံရမညျ မဟုတျ။ အလကား ပေးပဈလိုကျတာ။ worldwide – ကုမ်ပဏီက ကိုယျ့ဒတောကို ရုရှားမှာတငျ မဟုတျ။ တဈကမ်ဘာလုံး ကွိုကျတဲ့နရောမှာ သုံးခှငျ့ရှိတယျ။transferable – ဒီကု မ်ပဏီက ကိုယျ့ဒတောကို နောကျထပျကုမ်ပဏီတဈခုကို လကျပွောငျးလကျလှဲ လုပျခှငျ့ရှိ။
sub-licensable – ကိုယျ့ဒတောကို တဈခွားဆီကို လိုငျစငျနဲ့တကှ ကုမ်ပဏီက ရောငျးစားခှငျ့ရှိ။modify, adapt, publish, translate, creative derivative works from – ကိုယျ့ပုံကို ပုံတူကူးခှငျ့သာ မက သူတို့ ကွိုကျသလို ပွငျဆငျခှငျ့ရှိ၊ (ယုတျစှအဆုံး ကိုယျ့မကျြနှာကို ဝတျလဈစလဈ ဘျောဒီနဲ့ ဖိုတိုရှော့လုပျလညျးရ)distribute, publicly perform and display your User Content – ကိုယျ့ပုံကို၊ သူတို့ စိတျကွိုကျပွုပွငျထားတဲ့ ကိုယျ့ပုံကို သူတို့ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ လမျးဘေးမှာ ဆိုငျးဘုတျထောငျပွီးလညျး ပွခှငျ့ရှိ။
all media formats and channels now known or later developed – လမျးဘေးဆိုငျးဘုတျသာမက တီဗီ၊ သတငျးစာ၊ ဂြာနယျ၊ ယူ ကြုအပါအဝငျ ရှိရှိသမြှ မီဒီယာ ခနျြနယျအားလုံးမှာ ပွလို့ရ။ အခုမရှိသေးဘဲ နောငျမှပျေါလာတဲ့ ခနျြနယျမှာလညျး ပွလို့ရ. without compensation to you – ဘယျလိုပွပွ ကိုယျက ပိုကျဆံရမညျမဟုတျ။သုံးသငျ့/မသုံးသငျ့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါ။ဒါပါဘဲ။